Pyae Phyo (MMiTD): December 2013
Battery Booster ကိုတော့ Android User တိုင်းသိကြမှာပါ။ Android Phone 10လုံးမှာ 9လုံးလောက်ကတော့ Battery Booster ကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ အခုလည်း Version အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Battery Booster ကို 99.99% လောက်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Battery ရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး Battery သက်တမ်းကိုလည်း ရည်ရှည်သုံးနိုင်အောင်လို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Battery Booster ကတော့ လူတိုင်းသိထားပြီးသာဖြစ်လို့ ဆက်ပြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူးနော်။ Android OS 1.5 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးတေကြတဲ့ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းလေးတွေ မှာ အင်တာနက်မှ မိမိတို့ လိုအပ်သော Video နဲ့ အခြား လိုအပ်တာလေးတွေကို ဒေါင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော် ကတော့ဖုန်းနဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ
Posted by Thiha Htike No comments :
iOS 7+ အတွက် မြန်မာစာ နှင့် မြန်မာကီးဘုတ် မှန်ကန်စွာ သွင်းယူနည်း
iOS7အတွက် Jailbreak ထွက်ပြီးခဲ့သော်လည်း မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို ချက်ခြင်း သွင်းမရခဲ့လို့ Jailbreak ရဲ့ အနှစ်အရသာကို အပြည့်အဝ မခံစားခဲ့ကြရသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို လိုချင်ဇောဖြင့် Font နှင့် Keyboard အဟောင်းတွေကို သွင်းမိတဲ့အတွက် iOS "Crash" ဖြစ်ပြီး Restore အခါခါ ပြန်လုပ်ခဲ့ကြရသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။
ယခုတော့ အဆိုပါ အခက်အခဲများကို ပြေလည်စေနိုင်ဖို့ အတွက် မြန်မာ Developers များက ဝိုင်းဝန်း၍ iOS 7+ နှင့် အဆင်ပြေစေမယ့် မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို ထုတ်ဝေပေးလိုက်ပါပြီ...
iOS 7+ အတွက် မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို Developer များဖြစ်ကြသော ကိုသန့်သက်ခင်ဇော်၊ ကိုစေတန် နှင့် ကိုမိုးစက်တို့က သီးခြားစီ develope လုပ်ပေးထားကြပါတယ်။
ဒီအတွက် သုံးစွဲသူများအနေနှင့် ဘာကို Install လုပ်ရမှန်းမသိပဲ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မှားယွင်းစွာ Install လုပ်မိပါက iOS Crash ဖြစ်ခြင်း၊ Boot Looping ဖြစ်ပြီး Apple Logo ကနေ မတက်လာတော့တဲ့ အခြေအနေများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Posted by ရန်ကုန်သား No comments :
အမျိုးအစား: IOS ဆိုင်ရာ
၂၀၁၄ Live Wallpaper လေးပါ
ကဲကျွန်တော်တို့ ၂၀၁၄ မှာ ပျော်လိုက်
New Year Ring Tone
ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၁၄ကို ကြိုဆိုပါတယ် ဒီအတွက် ကြေင့် ၂၀၁၄ အတွက် Ring tone Apk လေးက်ို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ ကျွန်တော့်
ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း ရဲ့ ရှားပါးတိတ်ခွေဇတ်လမ်းလေး
ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း ရဲ့ ရှားပါးတိတ်ခွေဇတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Files Upload & Sharing with Google Drive (Google Drive မှာ ဖိုင်တင်ပြီး ပြန် ရှယ် တဲ့ နည်းလေးပါ။ Gmail အကောင့် မပျက် သရွေ့ လင့်မသေ)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖိုင်တစ်ခုခုကို Upload တင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ရေရှည် ခံမှာလား၊ စိတ်ချရလား၊ ကိုယ် Upload တင်ရတာနဲ့ ဒေါင်းယူမယ့်လူတွေအတွက်ရော အားလုံး လွယ်ကူ အဆင်ပြေမှာလားဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားပါတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းက ကျွန်တော် Mediafire ဆိုဒ်ကို သုံးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း Copyright ငြိတာတွေနဲ့ ခဏခဏ ဖိုင်တွေ အဖျက်ခံရတယ်။
ဥပမာ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုကို မူရင်းဆိုဒ်က ရောင်းစားတယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်က Patch ဖိုင်တွေနဲ့ တင်တာ၊ Portable လုပ်ပြီး တင်တာတို့ဆို ဖျက်ပါတယ်။ တစ်ခြားဖိုင်တွေဆိုလည်း တစ်နှစ်လောက် ပီးရင် ဖျက်ပစ်တာပါပဲ။ ဒါက Mediafire ဆိုဒ်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ Free File Hosting တိုင်းလိုလိုပဲ လုပ်နေကြတာ။ နောက် Flash Song တွေ Upload တင် [ လင့်ချိတ် ] တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများစုက Ning ဆိုဒ်တွေမှာပဲ သွားပြီး လုပ်နေကြတာပါ။
ခုနောက်ပိုင်း Ning ဆိုဒ်တွေဆို အများကြီးကို ပေါ်လာနေပါတယ်။ လင့်ချိတ်တဲ့လူတွေကလည်း အလွယ်တစ်ကူပါပဲ။ နောက် အဲဒီဆိုဒ်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆိုဒ်ပျက်သွားခဲ့ရင် ကိုယ်တင်ထားတဲ့ လင့်တွေက အလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ် အဲဒီဆိုဒ်ကို မဝင်ချင်တော့လို့ အပြီးထွက်ရင်လည်း လင့်တွေ ပျက်ပါတယ်။
Google Drive မှာ ကျွန်တော်တို့ Blogger တွေ၊ Flash Song Creator တွေအားလုံး အတွက် ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ ဖလပ်သီချင်းတွေ Mp3 သီချင်းတွေ၊ ပုံတွေ၊ PDF ဖိုင်တွေ နဲ့ တစ်ခြား ဖိုင်တွေအားလုံးကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင် သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်လည်မျှဝေဖို့ကို သင့်အနေနဲ့ Gmail အကောင့် တစ်ခု ရှိရုံနဲ့ 15 GB အထိ Upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။
.zip .rar နဲ့ ချုံ့ထားတဲ့ ဖိုင်တွေဆိုရင် လင့်ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ကျပြီး Flash Song တွေရင်လည်း လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်လို့ရပါတယ်။ Download အတွက် ပေးချင်တယ် ဆိုရင်လည်း လင့်တစ်ခုနဲ့တင် ရပါပြီ။ MP3 သီချင်းတွေဆိုရင်လည်း ဒေါင်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်။ Flash Mp3 Player တွေနဲ့ ကုတ်ထည့်ပြီး တင်လို့ရတယ်။
ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အသုံးပြုဖို့ .css , .js ဖိုင်တွေကိုလည်း ကုတ်နဲ့ထည့်ပြီး သုံးလို့ရတယ်။ html ဖိုင်တွေကိုလည်း လိုင်းပေါ်မှာတင် ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် Google Drive ထက်ကောင်းတာ ဘာရှိဦးမလဲ။ Google Drive ဆိုတာ www.google.com ကို သွားလိုက်ရင် Gmail ရဲ့ ညာဘက်မှာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာတွေ ရှာဖို့ Search , Images ရှိတယ်။ ဖုန်းမှာ သုံးဖို့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ဂိမ်းတွေ ဒေါင်းဖို့က Play ရှိတယ်။ Video ဖိုင်တွေ ကြည့်ချင်ရင် YouTube သွားပေါ့။ Gmail ဆိုတာကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူး ထင်တာပဲ။
လူတိုင်းမှာ Gmail အကောင့် ၁ ကတော့ အနည်းဆုံးရှိတာပဲလေ.. Google ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လိုအပ်တာတွေ အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝဘ်ဆိုဒ်ပါ။ အဲဒီတော့ သင်ယုံကြည် စိတ်ချစွာနဲ့ Google Drive ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်တွေကို Upload တင်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ဒီကနေ သွားပြီး သင့် Gmail အကောင့်နဲ့ Sign In လုပ်ပါ။ အဲဒါဆို ဒီစာမျက်နှာကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖိုင်တွေကို Folder တစ်ခုစီ လုပ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးရင် ဆော့ဝဲလ် ဒါမှ မဟုတ် Flash Song ၊ ကိုယ်တင်ချင်တာကို Upload တင်ပါ။
ကိုယ် Upload တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှယ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ကဖိုင်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ရှယ်မယ်ဆို လည်း ရပါတယ်။
Folder တစ်ခုလုံး ရှယ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Folder တစ်ခုလုံး ရှယ်ပါတယ်။ အဲဒါက ကိုယ့်အတွက်ရော ဒေါင်းတဲ့သူ အတွက်ပါ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်စိတ် သဘော အတိုင်းပေါ့နော်..
ခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင် Change... ကို နှိပ်ပါ။
အပေါ်ဆုံးက Public on the web ကို ရွေးပြီး Save လုပ်လိုက်ပါ။
အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ လင့်ကို ကော်ပီ ယူလိုက်ပါ။
ဒါက Flash Songs Folder တစ်ခုလုံး ရှယ်ထားတဲ့လင့်ပါ။
ဒါကFlash Song တစ်ပုဒ်ပဲ ရှယ်ပေးထားတာပါ။
အနီရောင်နဲ့ ပြထားတာက ရှယ်ထားတဲ့ ဖိုင်ရဲ့ id ပါပဲ..။ လင့်ကို အောက်ပါ အတိုင်း ပြောင်းလိုက်ပါ။
https://googledrive.com/host/ဒီနေရာမှာ ဖိုင် id ထည့်ပါ...
ကျွန်တော် အောက်မှာ လုပ်ပြထားပါတယ်။
ဒီနည်းအတိုင်း ဖိုင်ကို လင့်ပြောင်းလိုက်ရင် .zip .rar နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ဆိုရင် တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလုပ် ကျပါတယ်။ Flash Song ဆိုရင် လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်လို့ ရတယ်။ မူရင်းလင့်ကို ဒေါင်းလုပ်ပေး မယ်ဆို တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ပြတ် လင့်တစ်ခု တည်းနဲ့တင် တော်တော် အဆင်ပြေနေပါပြီ။
Upload တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှယ်တဲ့နေရာမှာ ဖိုင် တစ်ခုစီရှယ်မယ်ဆိုရင် အချိန်အများကြီးပေးရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် Folder တစ်ခုလုံးကို ရှယ်လိုက်ပြီး လင့်ကို ဖွင့်လိုက်။ ကိုယ်တင်ပေးချင်တာကို Right Click >> Copy Link Loction လုပ်ပြီးတော့ တင်လိုက်ရုံပါပဲ....။
ကျွန်တော် Google Drive က တင်ထားတာလေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ လင့်ပေးထားပါတယ်။
Software >> https://googledrive.com/host/0B-qdXDrTpme3c3N1cG1oNENFSU0/
Flash Songs >> https://googledrive.com/host/0B-qdXDrTpme3SFhfUExZRkttWGc/
Andriod Apk >> https://googledrive.com/host/0B-qdXDrTpme3SXdtdE5MczFNSTQ/
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်....။
Creadit ~ သူရိန်လင်း
Posted by ဇော် မင်း သန်း No comments :
အမျိုးအစား: Download နည်းပညာ , နည်းပညာ , နည်းလမ်းများ
IGI GAME ( For PC Game ) 80Mb
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် PC Game တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်းနည်းတာကြောင့်
ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲ How to Install ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးအရင်ဖတ်ပေးပါ။၀ါသနာတူရင်အောက်မှာသွား
1.Extract To Anywere Using 7zip
2. then play direct from extraction location
သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီး ရှယ် လိုက်ပါနော်...
IconCool FantaPhoto 2.1 Build 90630 Full + Patch ( for PC )
ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆွေများအတွက် ဓါတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်လို့ရမဲ့
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ IconCool FantaPhoto လေး
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ဒီကောင်လေးက Photoshop
IconCool FantaPhoto 2.1 Build 90630 Full + Patch isabrand new photo processing software developed by IconCool Team. Featured with Simple, Easy, Smart and Lovely Interface, you can add many fantastic effects to your photo inaminute, foster photo quality for your photo collection, publishing, and uploading to web.
Main of IconCool FantaPhoto 2.1 Build 90630 Full + Patch:
Red-eye Removal - This isauseful photo correction tool. With this function, you can easily remove or revamp the common red-eye effect from your digital photo.
Measure Tool - This new function can precisely calculate the distance between any two points in an image. It is an easy way to measure the distance from starting point to ending point you specified. With this function you can get the full details about the starting location (X and Y), the horizontal (W) and vertical (H) distances from X axes and Y axes, the measured angle (A), and total distance from X to Y (D1). Also it allows you to set the unit of measure in Pixels, inches and centimeters.
Partial Adjustment - This new function can let you apply some visible common effects to specified part on your current photo. With this function, you can make the following special effects to the selected part on your photo.
Effects Adjust Easily - Without using the complex and professional parameter adjusting, you can bring new looks to your photo through the ready-to-use effects such as Add light, Reduce light, Much Whiter and Lambency. All these effects FantaPhoto offers choose the optimized value as parameters so that justafew clickings on your mouse can complete all the processing quickly.
Photo Changing Freely - Useful functions are available in FantaPhoto even though complicate image changing controls are not included. FantaPhoto allows you freely to rotate, transform and resize your photos as well as powerful crop function.
Wonderful and Abundant Photo Decoration - FantaPhoto decorates your photos via adding frame, pasting pictures and watermark ready-to-use abundant styles with the lovely and diverse feature for variety of publishing such as web, MSN status photo.
Simple Professional Adjustment. - FantaPhoto chooses the common use controls and options for you to givealittle setting for the professional effects. The visible processing gives visual effects show.
Powerful Batch Processing - FantaPhoto helps you out when processing hundreds of photos via batch processing. Batch processing can support pasting pictures, resizing and watermark.
Posted by Myanmar IT Sky No comments :
အမျိုးအစား: Photo Edit
ဖုန်းမှာ Internet Speed နဲ့ Wifi Speed ကိုဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် Internet Speed Meter v1.3.3 APK
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် သင့်တော်မယ့် Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပထမအကြိမ် တင်တုန်းကတော့ အခု Application လေးကိုလူကြိုက်တော်တော်များခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း Version အသစ်ထွက်လာလို့ ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင် လည်းဆိုရင် Notification Bar မှာ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection ရဲ့ Speed ဘယ်လောက်ရ ရှိနေ လည်းဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင်မိမိ တစ်နေ့တာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Data Usage တွေ အားလုံးကို မှတ်တမ်းအနေနဲ့သိမ်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘောကျလို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ ကွန်နရှင် ကျနေလား မြန်နေလားဆိုတာသိ ရှိနိုင်ပြီး ကျနေတယ်ဆိုရင် ဆက်မသုံးဘဲ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါဆို ရင်တော့ ပိုက်ဆံမကုန်တော့ ဘူးပေါ့။ Speed Meter မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ကျနေမှန်မသိ တက်နေ မှန်းမသိနဲ့ ဖွင့်ပြီးစောင့်နေ ရင်တော့ ဖုန်း Bill ပိုကုန်မှာပေါ့ဗျာ။ Requires Android:2.3.3 and up
Animation တွေနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Live Wallpaper - Space Colony v1.2 APK
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Live Wallpaper ကတော့ အမိုက်စားဘဲဗျာ။ ညဖက်ကောင်းကင်ပြင်နဲ့ မိုးပျံ တိုက်တွေကို Animation တွေအနေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ရုပ်ထွက်လည်း အဆင့်မြင့်မြင့်ပါဘဲ။ နမူနာအနေနဲ့အောက်မှာ Screen Shoot တွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Internet Download Manager 6.18 Build 12 +Crack + Patch + Keygen (14Mb)
ဒီနေ့မှထွက်လာတဲ့ Internet Download Manager 6.18 Build 12 လေးကိုဘာပြဿနာမှမတတ်ပဲအမြဲ
တမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Crack + Patch + Keygen လေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်ချလက်ချ
Crack + Patch နဲ့တင်အဆင်ပြေနေပါပြီး Keygen ကိုတော့လိုအပ်မှထည့်ပါခင်ဗျာ..။
Internet Download Manager (IDM) isatool to increase download speeds, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.Internet Download Manager hasasmart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads.
Internet Download Manager News:
• Resolved problems with 1080p HD video recognition in Google Chrome
• Added support for Firefox 28 and SeaMonkey 2.23
• Fixedabug with erroneous dialup dialog
• Addedaworkaround for Trusteer bug when it crashes IE
• Fixedacritical bug in IE integration module
• Improved Windows 8.1 and IE 11 integration
• Resolved compatibility issues with Google Chrome 31
• Improved video discovery
• Added socks support
3] Exit IDM from the tray icon. Use the patch..
သူငယ်ချင်းတွေကိုထပ်ပြီး ရှယ် လိုက်ကြပါဘော်ဘော်တို့ရေ...
▼ 2013 ( 2098 )
▼ December ( 233 )
IconCool FantaPhoto 2.1 Build 90630 Full + Patch (...
ဖုန်းမှာ Internet Speed နဲ့ Wifi Speed ကိုဖော်ပြပေ...
Animation တွေနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Live Wallpaper - Sp...
Internet Download Manager 6.18 Build 12 +Crack + P...
မြန်မာတို့အတွက် Zodiac ဗေဒင်အလန်းလေးပါ
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (15) အမှတ် (1) (30.12.13)
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-35 (30.12.13)
Windows Lunix 2013 best and most beautiful !!!(10M...
Pho.to Lab PRO-Photo Editor v2.0.82 Pro (အရမ်းကို ...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 34 (30.12...
Huawei Y325-T00 Official Firmware
Android Phone တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုစမ်း...
How to Enable .net Framework 3.5.1 Offline in Wind...
Samsung Galaxy Naot2Android Ves=rsion 4.3 အတွက် ...
Internet Download Accelerator v5.17.1.1377 + Seria...
ALCATEL one touch 918 အား firmware ပြန်တင်ခြင်း
How to removeaWindows Password using the Hiren's...
Adobe® Photoshop® Touch Apk Full V1.5.1
Automatic Call Recorder Pro v3.62 ( for Android )
iOS7 Skin Pack [All Version] 42Mb Desktop ကိုအလှဆင...
Facebook အကောင့်လော့ကျနေသလား ဒီလိုပြန်ယူလိုက်ပါ
Skin Pack Auto UXThemePatcher Version 3.0 !!!(9Mb)...
တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ Wallpaper - Asteroids Pack v1...
How to Transfer Data between Samsung GALAXY, HTC O...
CWM mode ၀င်နည်းနှင့် Download mode ၀င်နည်း / Pin-...
Internet Connection Speed & PC ရဲ့ Speed ကိုမြှင်...
Screen maker – christmas sale v 2.5 for android(la...
Photo Studio PRO v 1.0.16 for android(latest versi...
Christmas winterland Game Apk (All Android) [13.1 ...
Need for Speed Rivals Full Version PC Game
SpeedMoto 3D Game Apk (All Android) 5Mb
Camera360 Ultimate v 4.8.1 for android(latest vers...
Tango Messenger, Video & Calls v 3.3.71425 for and...
Activate ဖြစ်ပြီးသား Genuine ဖြစ်ပြီးသား - Windows...
Facebook Official Version 4.0.0.26.3 for Android
Pho.to Lab PRO – photo editor v 2.0.82 pro for and...
aTilt 3D Labyrinth Apk Game (All Android) 4Mb
1Tap Cleaner Pro v2.27 ( for Android )
ကျွန်တော့ တင်သမျှကို ဖုန်းထဲမှာ ဖတ်ချင်သူများအတွက်...
Pro Root နော် Pro Root
Candle Apk (All Android) လှပတဲ့ဖယောင်းတိုင်းအရှင်ေ...
Call of Duty Ghost Apk (All Android) 24Mb
SterJo Wireless Passwords v.1.4 ( wifi password fi...
Advanced System Optimizer v3.5.1000.15646 + Patch
Internet အသုံးပြုနည်း(၂) (Website, Webpage and Dom...
Tethered Jailbreak နဲ့ Untethered Jailbreak ဘာကွာလ...
Internet အသုံးပြုနည်း အပိုင်း(၁)
Shwebook Dictionary Pro 3.1.1 APK Latest Version (...
How to Local Disk Format / Partition / Resize !!! ...
Cut the Rope Experiments HD v 1.7 for android(late...
WeChat v 5.1 for android(latest version)လေးပါ
TSF Shell v2.0.1 (3D စတိုင်လေးနဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ And...
Facebook Message Box ကနေ သီချင်းလေးတွေပါတဲ့ Christ...
Christmas live Wallpaper ( for Android )
How to Installing Windows XP,7,8 Movie Tutorial !!...
Y320 C Recovery Mode ၀င်နည်းနဲ့ မိတ်ဆွေတို့အကြိုက်...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-34 (23.12.13)
မြန်မာဗေဒင် စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် လက်ထောက် ဗေဒင် လေ...
Sniper Ghost Warrior 2-FLT (PC-Game)
How To Share LAN/Wired Internet via WiFi Without W...
Android phone Earror လေးများ အား ဆိုင်မလာဘဲ ဖြေခြင...
TinyCam Monitor Pro v 5.1.5 for android(latest ver...
MPT Bill Check for Android
Assassin's Creed IV : Black Flag (2013) PC Game (5...
Facebook Solutions (အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပေးပါ)
Advanced Video Compressor + Patch Full License Ver...
အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ - VirtuaGirl Live Wallpaper...
Math Formula2 Apk
Moment Cam 2.3.6 APK - English version(23Mb)
December 20, 2013 ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထွက် CCleaner 4...
Quick PDF Scanner Version : 2.04.56 (All Android)2...
မိုက်ခရိုဆောစ့် 2010 အတွက် Serial တွေမျှဝေပေးလိုက်...
ဆရာဦးအုန်းမြင့် ရေးထားတဲ့ အင်ဂျင်များ၏အခြေခံသဘောတရ...
Free Apple ID Apple Account ဖွင့်နည်း...
Swapps! side launcher Apk (All Android)
Sib Icon Editor 5.15 Portable (15Mb) Icon ဒီဇိုင်...
Symantec Endpoint Protection 12.1.4 (x86/x64) Ful...